यी हुन् संसारकै धनी जुवाडे, जस्ले युवतीलाई पनि…. – Kavrepati
Home / रोचक / यी हुन् संसारकै धनी जुवाडे, जस्ले युवतीलाई पनि….
यी हुन् संसारकै धनी जुवाडे, जस्ले युवतीलाई पनि….
admin 1 week ago	रोचक Leaveacomment 236 Views
पोकर किङको नामले चर्चित अमेरिकाका डेन बेल्जेरियन विश्वका सबैभन्दा धनी जुवाडे हुन् । उनले पोकर गेम खेलेरै अर्बौं रूपैयाँ कमाइसकेका छन् । रोचक कुरा त के भने दुनियाँकै धनी जुवाडे उनी हलिउडका कैयन् चर्चित फिल्महरूमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
हुन त उनको जीवनमा पहिलेदेखि नै पैसाको कमी थिएन । किनकि उनका बुवा धनी व्यापारी थिए । धनीको छोरा हुनुका कारण उनी बच्चैदेखि बेपरवाह भए । कसैलाई टेरेनन् । आफ्ना बुवाको ब’न्दुक बोकेर स्कुल गएको बेला उनी एकपटक पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनलाई स्कुलबाट निकालिएको थियो ।
अमेरिकाको लस भेगासमा करोडौं रूपैयाँ पर्ने आलिशान बंगलामा उनी बस्दछन् । घरमा उनी प्रायः पार्टी गर्दछन् । त्योबाहेक उनका अरू धेरै घरहरू पनि छन् ।
गएको वर्ष झण्डै सबा २ करोड रूपैयाँबराबरको मूल्य पर्ने घडी लगाएका कारण उनी चर्चामा आएका थिए ।
ब’न्दुक र लग्जरी गाडीका शौखिन छन्, उनी । उनीसँग एकसे एक महँगा तथा शानदार ब’न्दुक छन् । उनी युवतीहरू फेर्नमा पनि माहिर छन् । सोही कारण उनलाई प्लेब्वाई पनि भनिन्छ ।
ड्यानको कूल सम्पत्ति १५ करोड डलर छ । त्यसमध्ये अधिकांश सम्पत्ति उनले जुवा खेलेरै कमाएका हुन् । सन् २०१३ मा पोकर खेलेरै उनले एक रातमा १ करोड १० लाख अमेरिकी डलर कमाएको घटना निकै चर्चित भएको थियो ।
दुःखको कुरा ३९ वर्षका ड्यान बिल्जेरियन ड्र’ ‘ग्सको कुलतमा फसेका छन् । ३० वर्षको छँदा उनलाई हृ’दय’घा’त भएको थियो । १२ घण्टाभित्र उनलाई २–३ पटक हृ’दयघा’त भएको थियो । त्यतिबेला उनको ज्या’न मुस्किलले जोगिएको थियो ।
Previous सबिता भण्डारी प्रकरणबारे बल्ल डिएसपीको ड रला ग्दो खुलाशा, त्यो अन्तिम रात यस्तोसम्म भएको रहेछ हेर्नुहोस
Next पवनकलीले प्रियंकालाई पनि लाज लाग्ने प्रश्न गरिदिएपछि, निकै रमाइलो कुराकानी (भिडियो हेर्नुस्)
के तपाईंलाई निद्रामा यस्तो लागेको छ की तपाईंले सबै कुरा देख्न सुन्न सक्नुहुन्छ तर तपाईं …